Abasebenzi bezindawo zokudlela babhikishela ukuvalwa kotshwala | Scrolla Izindaba
Oweta, abesebenzi bezindawo zokudlela nabanikazi bamapulazi amawayini bahambele imigwaqo ngoLwesithathu bekhalaza ngokuvalwa kotshwala.
Ukuvalwa kotshwala, kanye nemithetho yomvalelo, kushabalalise amabhizinisi amaningi angenisa izihambi.
Inhlangano yokudlela yaseNingizimu Afrika (i-Rasa) – ehlanganisa imisebenzi eyi-800,000 – yahlela umbhikisho wezwe lonke, oholwa eNtshonalanga yeKapa. Izithombe ezingenhla zivela e-Stellenbosch.
Imboni yotshwala ithi ilahlekelwe izigidi zezinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili zamarandi yemali engenayo kanye nemisebenzi engaphezu kweyi-117,000 kusuka ekuvalweni kokuqala kotshwala